ကွန်ဖြူးရှပ် ( CONFUCIUS )
( b. 551 BCE, Qufu, state of Lu [now in Shandong Province, China]—d.
479 BCE, Lu )
1 /5/2022
Kong Qiu ဟု လူသိများသော ကွန်ဖြူးချပ်သည် တရုတ်ပြည်၏ အကျော်ကြားဆုံး ဆရာတစ်ဆူ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးသဘောတရား ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ၏အတွေးအခေါ်များသည် အရှေ့အာရှနှင့် ၄င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသမှ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို လွှမ်းမိုးလျှက်ရှိသည်။
ကွန်ဖြူရှပ်၏ ဘဝသည် ဧရာမတန်ဖိုးကြီးလှသည်ဟုဆိုခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဖက်၊ ပင်ပင်ထင်ထင် အံ့သြလောက်ဖွယ်လည်းမဟုတ်ဘဲ တရုတ်စကားလုံးအသုံးအနှုံးအရဆိုလျှင် သူ၏ဘဝသည် ရိုးရှင်းပြီး စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ဖြူရှပ်၏ လူ့သဘောသဘာဝ အဓိပ္ပါယ်မှာ အမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူသားတို့၏လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအား ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ပုထုဇဥ်သာမန်လူသားများမှ အံ့သြဖွယ် ပညာရှင်များနှင့် လေးစားခံထိုက်သူများ ဖြစ်လာစေရန် ဖြစ်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုသည် ကွန်ဖြူးရှပ်အတွေးအေခါ်အမွေအနစ်တို့တွင် နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေသည်။
လူသားတို့ကို တစ်ယောက်ချင်းသို့မဟုတ် စုပေါင်းကြိုးစားမှုမှတဆင့် သွန်သင်ဆုံးမနိုင်၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင် ပြီး ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာယုံကြည်ခြင်းသည် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒပီပီ ဖြစ်သည်။
ကွန်ဖြူရှပ်၏ ဘဝအကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ နည်းပါးသော်လည်း တိကျသောအချိန်သတ်မှတ်ချက်နှင့် သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကွန်ဖြူးရှပ်ကို Duke Xiang (551 BCE) ဘုရင် နန်စံသက်တမ်း ၂၂ နှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၈ လမြောက် ၂၇ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်ဟု ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအရ အဆိုပြုချက်ကို သမိုင်းပညာတို့က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ကို ကွန်ဖြူရှပ်၏မွေးနေ့အဖြစ် အရှေ့အာရှတခွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ကျင်းပကြသည်။ ၄င်းနေ့ကို ထိုင်ဝမ်တွင် ''ဆရာများနေ့'' အဖြစ် တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက် သတ်မှတ်ထားသည်။
ကွန်ဖြူရှပ်ကို Zhou ယဥ်ကျေးမှု၏ ဂီတနှင့် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းစဥ်လာတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားသောနေရာဟု မှတ်တမ်းတင်ခံရသည့် ယခု Shandong ပြည်နယ်တွင်ရှိသော ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံငယ် Lu မှ Qufo တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ မိသားစုအမည်မှာ Kong ဖြစ်ပြီး အမည်ရင်းက Quo ဖြစ်သည်။ သို့သော် တရုတ်သမိုင်းတစ်လျှောက် Kongzi (သို့မဟုတ်) Kongfuzi (Master Kong) ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ၁၈ ရာစု ဥရောပတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ကွန်ဖြူရှပ်အယူဝါဒ (Confucianism) ဝေါဟာရ သို့မဟုတ် လက်တက်ဘာသာ Confucius မှ ဆင်းသက်လာသော Confusion ဟူသည့် နာမဝိသေသနသည် တရုတ်ဘာသာဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြ၍မရသော ဝေါဟာရတစ်လုံးဖြစ်သည်။
သူ့ကိုမွေးဖွားသောအခါ ဆင်းရဲသောသာမန်လူတန်းစားနီးပါးဖြစ်လာသည့် မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဝင်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကွန်ဖြူရှပ်၏အဖေသည် သူ သုံးနှစ်သားအရွယ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ဘဝ၏အစောပိုင်းအချိန်တွင် အမေ၏သွန်သင်ဆုံးမမှုကိုခံယူခဲ့ရပြီးနောက် ကွန်ဖြူရှပ်သည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် ဇွဲကောင်းသော သင်ယူသူအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သည်။ အသက် ၁၅ နှစ်မှစတင်၍ သူ၏နှလုံးသားကို သင်ယူလေ့လာခြင်းအပေါ် မြုပ်နှံထားခဲ့ကြောင်း သေဆုံးခါနီး ပြန်ပြောခဲ့သည်။ သမိုင်းအထောက်အထားအရ သူသည် ငယ်ရွယ်သော ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း Grand Palace သို့ အလည်အပတ်သွားရောက်သောအခါ အရာအားလုံးကို စူးစမ်းလေ့လာသင့်သည်ဟု ခံစားမိခဲ့သည်။
ကွန်ဖြူရှပ်သည် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ဘဝတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်မပြုမီ မြင်းဇောင်းကိုစီမံကာ စာအုပ်များကို ထိန်းသိမ်းလျှက် အစိုးရရာထူးငယ်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကွန်ဖြူရှပ်၏ဆရာများမှာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို မသိရှိရသော်လည်း ထုံးတမ်းစဥ်လာများနှင့် ဂီတကိုသင်ယူရန် သင့်လျော်သောဆရာများကို သေချာစီစစ်၍ ရှာဖွယ်ခဲ့သည်။ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ဂီတ၊ လေးအတတ်ပညာ၊ ရထားစစ်သည်အတတ်ပညာ၊ လက်ရေးအတတ်ပညာနှင့် သချာ်ပညာ စသည့် အနုပညာ ခြောက်ရပ်အပေါ် ကျွမ်းကျင်မှု၊ အထူးသဖြင့် ကဗျာ၊ သမိုင်း၊ ဂန္နဝင် ရိုးရာယဥ်ကျေးမှုတို့နှင့် ရင်းနီးကျွမ်းဝင်မှုတို့က သူ့အား အသက် ၃၀ ကျော်အတွင်း ဆရာတစ်ဆူဖြစ်လာစေခဲ့သည်။
ကွန်ဖြူရှပ်သည် ပညာရေးကို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန်လေ့လာသင်ယူစေလိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခု နှင့် ဘဝလမ်းစဥ်တစ်ခုအဖြစ် သင်ကြားခြင်းအနုပညာကို တည်ထောင်ရာတွင် အရေးပါသော တရုတ်ပြည်မှ ပထမဆုံး ဆရာအဖြစ်လူသိများပေသည်။ကွန်ဖြူရှပ်မတိုင်ခင်က မင်းမျိုးမင်းနွယ်မိသားစုတို့သည် တိကျသော အနုပညာဘာသာရပ်တို့ကို သားသမီးတို့အားသင်ပြရန် နည်းပြဆရာတို့အား ငှားရမ်းသင်ယူစေခဲ့သည်။ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများလည်း လက်အောက်ငယ်သားတို့အား သူတို့၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ယူကြရန် ညွှန်ကြားကြသည်။ သို့သော် ကွန်ဖြူရှပ်သည်ကား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို တိုးတက်ပြောင်းလဲစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ဘဝတစ်ခုလုံးအား သင်ကြားသင်ပြရေးတွင် မြှပ်နှံထားသည့် ပထဦးဆုံးသူဖြစ်ပေသည်။ လူသားတိုင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သူသည် အလားအလာရှိသော ခေါင်းဆောင်များအတွက် လူ့သဘာဝအစီအစဥ်တစ်ခု နှင့် လူတိုင်းအတွက် ပညာတံခါးကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်ယူခြင်းဆိုသည်မှာ အသိပညာဗဟုသုတ ရှာဖွယ်မှုသက်သက်မဟုတ်ဘဲ အကျင့်စာရိတ္တတည်ဆောက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
ကွန်ဖြူရှပ်အတွက် ပညာရေး၏ အဓိကတာဝန်မှာ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို လေ့ကျင်းပေးရာ၌ စနစ်တကျနည်းလမ်းတို့ကို ထောက်ကူပေးရန် နှင့် စဥ်ဆက်မပြတ် လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် မိမိကိုယ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​အောင်ပြုမှုတို့ ပါဝင်သော ဖြစ်စဥ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ယူခြင်းသည် ကိုယ်ကျိုးအတွက်ဟု အလေးအနက် ဆိုခဲ့သော်လည်း ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စစ်မှန်သောပညာရေးသည် သီးခြားခွဲထုတ်၍မရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကွန်ဖြူရှပ်သည် သူ၏ အတွေးစိတ်နှင့် ကမ္ဘာ့ကြီးအတွက် အမှုထမ်းလိုခြင်းကို ငြင်းပယ်သူတို့နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကမ္ဘာ့အတွင်းပိုင်းမှ ပြောင်းလဲမှုကိုကြိုးပမ်းမည့်လမ်းစဥ်ကို ရွေးချယ်လျှက် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကင်းကွာနေထိုင်ရန် သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုကို ခုခံခဲ့သည်။ ကွန်ဖြူရှပ်သည် သူ၏ လူသားဆန်သော အယူအဆတို့ကို အစိုးရအစီအမံဖြင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လိုသော ဆန္ဒရှိလျက် နိုင်ငံရေးတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
အသက် ၄၀ နှောင်းပိုင်းနှင့် ၅၀ အစောပိုင်းတွင် ကွန်ဖြူရှပ်သည် တရားသူကြီး၊ထို့နောက် ပြည်သူ့ရေးရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ နောက်ဆုံး Lu ပြည်နယ် တရားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း အမှုထမ်းခဲ့သည်။ သူသည် သံတစ်မန်ခရီးစဥ်တစ်ခုတွင် ဘုရင် Lu နှင့်အတူ သူ၏ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် လိုက်ပါသွားဖူးသည်။ သို့သော် ကွန်ဖြူရှပ်၏ နိုင်ငံရေး သက်တန့်သည် တိုတောင်းခဲ့သည်။ ဘုရင့်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှုသည် သူ့ကို ခေတ်အာဏာပိုင်များ၊ ဂျီမိသားစုကြီးများနှင့် ကင်းကွာစေခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ​သူ၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပိုင်းသည်လည်း ဘုရင်ကို ဘဝင်ခိုက်လောက်အောင် ကြည်နူးနှစ်သိမ့်စေခဲ့သည့် ဘုရင်၏ အတွင်းလူများနှင့် မကိုက်ညီခဲ့ပေ။ အသက် ၅၆ နှစ်တွင် အထက်လူကြီးများက သူ၏မူဝါဒကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်း သိလိုက်ရသောအခါ ကွန်ဖြူရှပ်သည် အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန် အခြားပဒေသရာဇ် နိုင်ငံတော်တစ်ခုကို ကြိုးစားရှာဖွယ်ရန် တိုင်းပြည်မှ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ သူသည် နိုင်ငံရေးအရ ကတိုက်ကရိုက် ဖြစ်နေသော်လည်း ၁၂ နှစ်တာ ပြည်ပတွင်နေထိုင်နေစဥ်အတွင်း မြောက်များစွာသော ကျောင်းသားအုပ်စုသည် သူ့နောက် လိုက်ခဲ့ကြသည်။ အမြော်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသူ၊ လမ်းပြနိုင်သူအဖြစ် သူ၏ ကျော်ဇောမှုသည် ပြန့်ကျက်နေခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က နယ်ခြားမှတ်တိုင်တစ်ခုအား အုပ်ထိန်းသူတစ်ဦးက လူသားတို့အား နှိုးဆော်ရန်ကောင်းကင်ဘုံ၏ နိမိတ်ဖတ်အမှတ်သညာကို တီးခေါက်သည့် ထိုခေတ်အခါက ''ခေါင်းလောင်းအတွက် သစ်သားလျှာ'' ဟု ကွန်ဖြူရှပ်အား ရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ( Analects, 3:24 )။ အမှန်မှာ ကွန်ဖြူရှပ်သည် မအောင်မြင်နိုင်ဟု လက်တွေ့ကျကျသိရှိခဲ့သော်လည်း ဖြောင့်မတ်သော ဇွဲနှင့် ဆက်တိုက်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့သော သူရိယစိတ်ဓာတ်ရှိသူအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ခံယူထားခဲ့သူဖြစ်သည်။